14 Seruia ba+ Yoab+ hui sɛ ɔhene koma wɔ Absalom so.+ 2 Enti Yoab soma kɔɔ Tekoa+ kɔfaa ɔbea nyansafo+ bi fi hɔ bae, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, kofura awerɛhow ntama na yɛ wo ho sɛ obi a ɔredi awerɛhow; mfa ngo nsra,+ na yɛ sɛ ɔbea a ɔde nna pii adi obi a wawu ho awerɛhow.+ 3 Afei bra ɔhene anim bɛka nsɛm yi kyerɛ no.” Ɛnna Yoab de nsɛm no hyɛɛ n’anom.+ 4 Na Tekoani bea no baa ɔhene anim bɛkotow de n’anim butuw fam,+ na ɔkae sɛ: “O ɔhene, gye me!”+ 5 Ɛnna ɔhene bisaa no sɛ: “Asɛm bɛn na ato wo?” Na ɔbea no kae sɛ: “Me kunu awu, enti meyɛ ɔbea kunafo.+ 6 Ná w’afenaa wɔ mmabarima baanu. Wɔn baanu no dii aperepere wɔ afuw+ mu bere a ogyefo+ bi nni hɔ a ɔbɛpata wɔn. Ɛbae sɛ obiako bɔɔ ne yɔnko hwee hɔ kum no. 7 Na hwɛ, abusuafo no nyinaa asɔre aba w’afenaa so, na nea wɔreka ara ne sɛ, ‘Fa nea okum ne nua no ma yɛn na ne nua a wakum+ no no kra nti, yenkum no,+ na yɛmpopa nea odi ade no mfi hɔ!’ Enti wɔrebedum me nsramma a aka no de apopa me kunu din ne n’asefo afi asase so.”+ 8 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Kɔ wo fie, na mɛhyɛ ma wɔadi w’asɛm no ho dwuma.”+ 9 Afei Tekoani bea no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “O me wura ɔhene, ma asodi no mmra me ne me papa fie so+ na ɔhene ne n’ahengua nni bem.” 10 Na ɔhene san kae sɛ: “Sɛ obi ka asɛm bi kyerɛ wo a, fa no brɛ me, na ɔrenyɛ wo bɔne bi bio.” 11 Nanso ɔbea no kae sɛ: “Ɔhene, mesrɛ wo, kae Yehowa wo Nyankopɔn,+ na mogya weretɔfo+ no ankɔ so ansɛe ade, na wɔanyi me ba no amfi hɔ.” Ɛnna ɔkae sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ wo ba no ti nhwi biako mpo+ rentɔ fam.” 12 Afei ɔbea no kae sɛ: “Mesrɛ wo, ma w’afenaa+ nka asɛm+ bi nkyerɛ me wura ɔhene.” Na ɔkae sɛ: “Kasa!”+ 13 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Dɛn nti na woanya adwene a ɛnteɛ saa+ wɔ Onyankopɔn nkurɔfo ho?+ Sɛ́ ɔhene gu so rekasa yi, ɔte sɛ onipa a odi fɔ+ no ara, efisɛ ɔhene mmaa ne ho nipa a watwa no asu no nsan mmae.+ 14 Owu de, yebewu,+ na yɛbɛyɛ sɛ nsu a wɔahwie agu fam a wontumi nsesaw bio. Nanso Onyankopɔn renyi ɔkra bi mfi hɔ,+ na wadwen nea ɛbɛyɛ a ɔde nea wɔatwa no asu no bɛsan aba. 15 Na afei, nea enti a mebɛkaa asɛm yi kyerɛɛ me wura ɔhene ne sɛ, ɔman no ma misuroe. Enti w’afenaa kae sɛ, ‘Ma me ne ɔhene nkɔkasa ɛ. Ebia ɔhene bɛyɛ nea n’afenaa bɛka no. 16 Ɔhene atie n’afenaa, na onipa a ɔrepɛ me asɛe me ne me ba koro no afi agyapade a Onyankopɔn de ama yɛn ho no, obegye me afi ne nsam.’+ 17 Ɛno nti na w’afenaa kae sɛ, ‘Ma me wura ɔhene anom asɛm mma me ɔhome.’ Efisɛ me wura ɔhene te sɛ nokware Nyankopɔn bɔfo,+ na otumi hu papa ne bɔne;+ Yehowa, wo Nyankopɔn nni w’akyi.” 18 Ɛnna ɔhene buaa ɔbea no sɛ: “Mesrɛ wo, nea merebebisa wo yi, mfa biribiara nhintaw me.”+ Na ɔbea no kae sɛ: “Ma me wura ɔhene nkasa.” 19 Na ɔhene bisae sɛ: “Yoab+ nsa wɔ eyi nyinaa mu anaa?”+ Ɛnna ɔbea no buae sɛ: “O me wura ɔhene, sɛ́ wo kra te ase yi,+ nea me wura ɔhene aka nyinaa, obiara ntumi nnan mfi ho nkɔ nifa anaa benkum; ɛyɛ w’akoa Yoab na ɔhyɛɛ me, na ɔno na ɔde nsɛm yi nyinaa hyɛɛ w’afenaa anom.+ 20 W’akoa Yoab yɛɛ saa na ama asɛm yi adan, nanso me wura nyansa te sɛ nokware Nyankopɔn bɔfo+ nyansa, na onim asase so nsɛm nyinaa.” 21 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Hwɛ, mɛyɛ saa.+ Enti kɔ na kɔfa aberante Absalom bra.”+ 22 Na Yoab kotow de n’anim butuw fam, na ohyiraa ɔhene.+ Afei Yoab kae sɛ: “O me wura ɔhene, ɛnnɛ na w’akoa ahu sɛ manya w’anim dom,+ efisɛ ɔhene ayɛ nea n’akoa aka no.” 23 Yoab kaa saa no, ɔsɔre siim kɔɔ Gesur+ kɔfaa Absalom baa Yerusalem.+ 24 Nanso ɔhene kae sɛ: “Ma ɔmfa n’ani nkyerɛ n’ankasa fie, na mma ommmehu m’anim.”+ Enti Absalom de n’ani kyerɛɛ n’ankasa fie, na wankohu ɔhene anim. 25 Israel nyinaa, ná obiara nni hɔ a ne ho yɛ fɛ+ na wɔkamfo no sɛ Absalom. Efi ne nan ase kosi ne mpampam, na dɛm biara nni ne ho. 26 Sɛ oyi ne ti nhwi na ɔkari a, emu duru yɛ nnwetɛbona ahanu, ahemfie nkaribo so—afe biara na oyi ne ti nhwi, efisɛ na ɛyɛ no duru dodo.+ 27 Wɔwoo mmabarima baasa+ ne ɔbabea biako a wɔfrɛ no Tamar maa Absalom. Ná ɔyɛ ɔbea a ne ho yɛ fɛ yiye.+ 28 Absalom kɔɔ so tenaa Yerusalem mfe abien, na wanhu ɔhene anim.+ 29 Ɛnna Absalom somae sɛ wɔnkɔfrɛ Yoab mmra na ɔnsoma no ɔhene nkyɛn, nanso wamma. Na ɔsan somae, ne mprenu so, ɛno nso wamma. 30 Afei ɔka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Monhwɛ, Yoab asase da me de ho, na ɔwɔ atoko wɔ so. Monkɔ nkɔto mu gya.”+ Enti Absalom nkoa de ogya kɔtoo asase no mu.+ 31 Ɛnna Yoab sɔre kɔɔ Absalom nkyɛn wɔ fie, na obisaa no sɛ: “Dɛn nti na wo nkoa de ogya akɔto m’asase no mu?” 32 Ɛnna Absalom ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Hwɛ! mesoma baa wo hɔ sɛ, ‘Bra na mensoma wo ɔhene nkyɛn na kɔka kyerɛ no sɛ: “Dɛn nti na mifi Gesur+ aba ha? Anka eye ma me sɛ meda so te hɔ. Enti afei ma minhu ɔhene anim, na sɛ bɔne bi wɔ me ho a,+ ma onkum me.”’” 33 Enti Yoab kɔɔ ɔhene anim kɔka kyerɛɛ no. Ɛnna ɔfrɛɛ Absalom, na ɔbaa ɔhene anim bɛkotow de n’anim butuw fam ɔhene anim, na ɔhene few Absalom ano.+